Ipholiyesta Ndandiziva, ipholiyesta Enalitini Waziva, Needlepunched Waziva - Tiantai Yongzhu
Air-moya lokucoca umnatha
Nylon umoya-moya filter umnatha
Ipholiyesta air-moya filter umnatha
Polypropylene umoya-moya filter umnatha
Industrial Air product
uhlobo filter ipholiyesta
uhlobo filter Polypropylene
lobushushu eliphezulu uthuli-ekususeni ibhegi ngelaphu
Industrial Ulwelo product
Micron Rating Bags Icebo lokucoca Ulwelo
Inaliti weva product ulwelo
Tiantai Yongzhu Isihluzi Factory yinto umenzi enkulu ilaphu nonwoven e-China. siye bezinikela ukuba ukwanda kwe-mali ngomhla wokwenziwa, workshop, kunye nezixhobo, ukungenisa kumakhondo omsebenzi esayensi phambili zobugcisa kwaye ukusuka kwilizwe langaphandle.
Inkampani yethu enamandla ukwenziwa amandla kwaye ikakhulu ukuvelisa izinto nocococ, ibhegi ukususwa uthuli, inaliti waziva, nonwoven ilaphu filter nomoya-moya lokucoca ulwelo. iimveliso zethu ziye zithunyelwe kumazwe angaphezu kwama-40, kuquka mpuma Asia, kuMbindi Asia, eYurophu, Australia ne eMelika.
Thina rhoqo eyisingela uphando iziveliso ezitsha, yaye liphuhlise uthotho iimveliso, njengoko ezi zinto zilandelayo:
1) High-lobushushu izinto ukuhluza: Metamax yenaliti waziva, FMS inaliti waziva, fiberglass inaliti waziva, PTFE umboniso inaliti waziva, izixhobo bhanya ukuhluza, P84 inaliti waziva, yePPM inaliti waziva, izinto ezingezo-ephothiweyo lokuhluza. ngokubanzi isebenza ukusetyenziswa zokususa uthuli-lobushushu eliphezulu kwi mveliso yokunyibilikisa isinyithi lengca, ukuthuthwa kwenkunkuma, ugesi umphunga, izinto ubushushu-bameleneyo nawo, ngebhitumene ukuphazamiseka, amalahle, isamente, coke, ioli ibhoyila ukutsha, njl
2) Iimveliso Ulwelo-ukuhluza: ephothiweyo isihluzi-ngelaphu, monofilament filter-ngelaphu, ezinepolypropylene inaliti waziva, inaliti entsonkothileyo waziva, ezisetyenziswa kwi izixhobo yokugutyula ezifana isakhelo nebhanti-type filter-ndaba.
Ukuthembela emandleni izityebi, izixhobo phambili, iimveliso zethu ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo epheleleyo, Haotian sele yazuza abathengi zombini zasekhaya ngamazwe 'trust. Injongo yethu: Siya kusoloko sibeke umgangatho kunye ngetyala kwindawo kakhulu.
3) air-moya lokucoca ulwelo mesh.Widely esetyenziswa kwiindawo njengoko ukuhluza kunye noshishino ngokwahlukana (Luphawu asetyenziswe ukuhluza ukutya kunye filter noshishino), amashishini ze-petroleum, lwekhemikhali, yokunyibilikisa isinyithi, isamente, dedusting lokusingqongileyo kunye am. rates product ingaba ukusuka-27% ukuya 78%. Afana neshishini ukutya wokugaya ukuhluza kunye nomgubo nokugaya, umama kunye nezinye iinkozo nokugaya. Kanye kwemveliso iswekile, ubisi olungumgubo, ubisi zesoya njl
ezinepolypropylene air-moya filter umnatha
ring Steel bag filter inxeba
PTFE ndizayo inaliti waziva
Ipholiyesta anti-ndawonye inaliti waziva (ezihlangene ...
P84 (polyimide) kwakungcono inaliti
Idilesi: Idilesi: NO. 2 Tuanjie Road of Pingqiao Town Tiantai Taizhou City Zhejiang Pro. China.